စက်ရုံစူပါကြီးကြပ်ရေးမှူးယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာအပြင်ဘက်တွင် - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / လယ်ကွင်းလုပ်ငန်း|Supervisor / စက်ရုံစူပါကြီးကြပ်ရေးမှူးယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာအပြင်ဘက်တွင်
ယာကုပ် မေ 2, 2016 လယ်ကွင်းလုပ်ငန်း|Supervisor 1 မှတ်ချက် 739 views
ဖယ်ရှားရေးနှင့်သင့်လျော်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပုဂ္ဂိုလ်များမှလိုအပ်ချက်များကိုပန်းချီပျော်ရည်များနှင့်ဆေးသုတ်သည့်အစီရင်ခံစာများကို အသုံးပြု. နံရံများကနေရေးခွဖုံးလွှမ်း.
လိုအပ်ချက်နှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများမှတ်တမ်းများနှင့်အစီရင်ခံစာများကို ပြင်ဆင်. နှင့်ထိန်းသိမ်းထားလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများထိန်းသိမ်းထား.
သြဒီနိတ်အဆိုပါကျောင်းလေဟာနယ်နှင့် Shampoo & ကော်ဇောလှည်းဆေး၏သန့်ရှင်းရေးပြင်ပတွင်သွားလာနှင့်တရားရုံးများတွင်ညွှန်ကြားနှင့်ပါဝင်.
ထိုကဲ့သို့သောခဲတံချွန်စက်ကို install နှင့်စာသင်ခုံပရိဘောဂများနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများမှအသေးအဖှဲပြုပြင်ရေးအောင်အဖြစ်အလင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများကိုညွှန်ကြားနှင့်လုပ်ဆောင်.
လက်အောက်ငယ်သားများပုံမှန်အစည်းအဝေးများနှင့်သည် Periodic စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကျင်းပ.
သက်ရောက်မှုဓာတုဗေဒတစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်များကိုအရည်အသွေးအာမခံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး QA သို့ QC ကြီးကြပ်ပံ့ပိုး.
လွတ်လပ်စွာဖျော်ဖြေဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့် On-line ကိုကိရိယာပေါ်တွင် အခြေခံ. လိုအပ်သောဓာတ်အားပေးစက်ရုံရေချိန်ညှိခြင်းနှင့်ဓာတုစနစ်များကိုမှန်ကန်စေသည်.
ဒေတာအစီရင်ခံစာများပြင်ဆင်နှင့်တစ်ဦး QA သို့ QC အစီအစဉ်၏ရန်နှင့်အုပ်ချုပ်မှုလိုက်နာမှုသေချာ
အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းသတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် LIMS ကွန်ပျူတာများသို့ဒေတာ entry ကိုကြီးကြပ်.
ဓာတုနျ Standard နည်းလမ်းများမှကိုက်ညီ gravimetric spectrophotometric turbidimetric နှင့် titrimetric နည်းလမ်းများသုံးပြီးပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးလုပ်ဆောင်.
စံနည်းလမ်းများနှင့် NELAC ဖို့ထိန်းလိုက်နာအပ်သောအဖြစ်ယေဘုယျဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်လိုအပ်အဖြစ်ဓာတ်ခွဲခန်းဓါတ်ကူပစ္စည်းပြင်ဆင်.
ထိန်းချုပ်မှုလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော demineralizers osmosis နှင့် Electro-deionization ပစ္စည်းကိရိယာများ reverse အဖြစ်ရေကုသမှုစနစ်များ troubleshoots.
အားလုံးထုတ်ကုန်များအတွက်ပစ္စည်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမှာ Data Sheet များ MSDS အပေါ်ပေးအပ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူလိုက်နာ
ဤသို့နှင့်သင့်လျော်သောအထဲက၎င်း tag နှင့်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမူဝါဒများနှင့်အလေ့အကျင့်များနှင့်အညီစက်ရုံပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စနစ်များ lockout မှလိုက်နာစောင့်ထိန်း.
Troubleshoot ကို start up သို့မဟုတ်မှန်ကန်သောသို့မဟုတ်ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုတို့အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများပိတ်ပစ်အခြားဓာတ်အားပေးစက်ရုံပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်.
reviews နှင့်ခွင့်ပြုလိုက်သည်အချိန်စာရွက်များ subordinates.
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာနှင့်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် အခြေခံ. မူးယစ်ဆေးအခမဲ့လုပ်ငန်းခွင်မူဝါဒပြဋ္ဌာန်းတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်ပါစေ.
တက်တဲ့အကြီးတန်းကွန်ယက် Technician အတနျးဖို့အားလုံးကိုတာဝန်များကို၏ပြီးပြည့်စုံသောအသိပညာကိုသိမ်းယူသင့်ပါတယ် 16 နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝယ်လိုအားများတူညီသည့်အခါလိုအပ်ချက်များ execute နိုင်တော့မည်.
ထိရောက်သောတပ်ဆင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပရိယာယ် generate ရန်လိုအပ်သောအားကောင်းတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းရေးကျွမ်းကျင်မှု
ဥပဒေအသိပညာနှင့်နားလည်မှုအလုပ်လုပ်ဖျော်ဖြေခံရဖို့အလုပ်သက်ဆိုင် codes တွေကိုနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုအုပ်စိုး.
လိုအပ်တဲ့အဖြစ် standby အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း.
ပြည်နယ်တရားခိုင်လုံသောကားမောင်းသူ s ကိုလိုင်စင်သက်ဆိုင်သောဝင်စားရပါမည်.
ဒီအနေအထားအလုပ်အကိုင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု OSHA စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများသုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်လိုအပ်ပါတယ်.
လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလုပ်အတွက်အရည်အသွေးအာမခံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး QA သို့ QC အစီအစဉ်များနှင့်အလုပ်လုပ်အသိပညာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း.
စနစ်များကိုဆားရည်အိုင်အာရုံစူးစိုက်မှု flash ကိုရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့်ဓာတုအစာကျွေးခြင်းစနစ်များကိုအအေးတာဝါတိုင်အအေး demineralizer စနစ်များအခြေခံမူများနှင့်စစ်ဆင်ရေး၏အလုပ်လုပ်ကိုင်အသိပညာ.
စက်မှုဇုန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် OSHA စည်းမျဉ်းများအလုပ်လုပ်အသိပညာ.
ဓာတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် analytical တူရိယာ၏အသုံးပြုမှုအတွက်ကျွမ်းကျင်မှု.
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဓာတ်ခွဲခန်းအခြေခံမူများနှင့်အလေ့အကျင့်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစာစောင်များကိုထုတ်လုပ်သူ operating ညွှန်ကြားချက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်နားမလည်နိုင်ခြင်း.
နားလည်ဖတ်ပါနှင့်ပစ္စည်းလုံခြုံမှုမှာ Data Sheet များ MSDS နှင့်အတူလိုက်လျောနိုင်စွမ်း.
အားကြီးသောဖောက်သည် orientation ကိုပြသ.
အလိမ္မာသည်းခံခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးသုံးပြီး Interpersonal ကျွမ်းကျင်မှု.
သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများကိုနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ဆက်စပ်သောကို Safe အလေ့အထများ.
အခြေခံပညာ recordkeeping နည်းစနစ်များနှင့်အခြေခံကွန်ပျူတာစစ်ဆင်ရေး.
လုံခြုံစွာအထိအလေးချိန်အရာဝတ္ထုကိုင်တွယ်ရန်နည်းစနစ် 100 အသင်းများအတွက်ပေါင်သို့မဟုတ်အထူးပြုပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု..
ချုပ်နှောင်ထားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အချိန်ဇယားများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ပတ်သက်. site ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့်အတူကွန်ဖရ.
အဆိုပါဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထား program နဲ့ပတ်သက်ခန့်မှန်းအချိန်နှင့်ပစ္စည်းများ.
လွန်ခဲ့သော Regulatory Compliance Analyst Job Description Sample
နောက်တစ်ခု ပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, Elementary And Secondary College Career Description Sample